AKW COMKWỌ AKWPKWỌ |
igwe mmebi oku
electric rotary hama
peturuolu n'akuku grinder
peturuolu isi akuakuzinwo
mmanụ ụgbọala ọnwụ igwe
peturuolu ụwa auger
mmanụ ụgbọala hama
mmanụ ụgbọala mmetụta spana
mmanụ ụgbọala ikpo ọkwọ
mmanụ ụgbọala ikpo ọkwọ ụgbọala na hama
peturuolu rotary hama
mmanụ ụgbọala mmanụ mkpọpu ala
mmanụ ụgbọala petrol
site ha na 20-11-20
Ka na-echegbu onwe gị na ị gaghị achọta igwe mpempe akwụkwọ kwesịrị ekwesị? Na Mee nke afọ a, ụlọ ọrụ anyị jiahao mere igwe eji emepụta mmanụ ụgbọala ọhụrụ, nke nwere ụdị ihe eji emepụta ọgbara ọhụrụ, nke nwere ike imetụta ọhụụ gị. JH350 peturuolu diski cutter mfe he ihe, Nkume, Adobe, na paving, Na nke ...
Nzukọ pụrụ iche
Na 3:30 pm na August 7, 2020, anyị ụlọ ọrụ ẹkenịmde a nnukwu ngwaahịa nanị ogbako na etiti nke Yongkang n'isi ụlọ ọrụ. Werelọ ọrụ si na ngwaike ụlọ ọrụ na-kpọrọ òkù ka ha gaa ogbako. N'okpuru nkwadebe anyị ji nlezianya mee, ụlọ ọrụ anyị gosipụtara mmebi eletrik JH-168A 2200W ...
Yongkang Ngwaike Ngosiputa
October 20, Yongkang igwe na Hardware Expo ẹkenịmde ke Yongkang International Convention na ngosi Center. Ihe ngosi ahụ gosipụtara ụlọ ọrụ ngwaike na igwe. Site na nke a ngosi, anyị ụlọ ọrụ gosiri anyị na ngwaahịa ndị ahịa, na site na-na saịtị nkwurịta okwu, anyị ngalaba ...
Yongkang Jiahao Ngwá Ọrụ Co., Ltd, Yupi Industry mpaghara, n'ebe ọdịda anyanwụ n'okporo ámá obodo, Yongkang, Zhejiang Province 321300, PRChina
Kpọọ Anyị Ugbu a: 0086-13906792067